Maxay Wadaagaan Hogaamiyayaasha Guulaystay Iyo Kuwa Guul Daraystay? Maxayse Ku Kala Duwan Yihiin? – somalilandtoday.com
Maxay Wadaagaan Hogaamiyayaasha Guulaystay Iyo Kuwa Guul Daraystay? Maxayse Ku Kala Duwan Yihiin?
Hogaamiyayaasha guulaystay iyo kuwa guul daraystay labaduba waxay ka siman yihiin, helista fursad iyo waqti isku mid ah, oo ay waajibaadkooda ku gutaan, sida sanad, bil, todobaad, iyo 1440 miridh habeen iyo maalin kasta.
Hasayeeshee, waxay ku kala duwan yihiin aqoonta eebe siiyo, abaarta ay higsanayaan, aragtiyaha ay aaminsan yihiin, ujeedooyinka ay xaqiijiyaan, eel xun ama ayaan wacan wixii ay ummadahooda uga tagaan, iyo astaamaha ay caanka ku noqdaan ee iin iyo amaanba leh.
Ugu dambayn, haddaba akhriste ogow, guusha ruux kastaa waxay ka bilaabantaa goobta uu taagan yahay, garashada yoolkiisa, gudashada xilkiisa, sixida gefkiisa, gadhqaadka hayaankiisa guul-galka u ah, geediga nolosha gaaban.
W/Q Wasiirkii hore ee wasaaradda Madaxtooyadda Maxamuud Xaashi Cabdi